Inxalenye ka-'2/3 iphe. ihlengahlengiswe (ukuhamba okucuthiweyo)
I-Apartment ye-2/3 yabantu efikeleleka kubantu abanokuhamba okuncitshisiweyo kunye ne-terrace yangasese njengenxalenye yendawo yokuhlala yabakhenkethi. Iqula lokuqubha langaphandle eliqhelekileyo kuwo onke amagumbi. Ifumaneka kumda wenye yezona lali zintle eFransi, indawo yejografi ilungele ukuhlola iiGers.
Indlu ye-T2 PMR ibekwe kwesinye sezakhiwo zokhuni zeDomaine de Saint Orens yokuhlala usapho. Nge-34 m2 yayo kumgangatho ophantsi, ifanelekile ukuhlalisa abantu abayi-2/3 abanegumbi lokulala eliphindwe kabini, igumbi lokuhlambela kunye nebhedi yesofa kwigumbi lokuhlala. Ikhitshi laseMelika lixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye lihlengahlengiswe. Inika ukufikelela kwinqanaba legadi yabucala, kubandakanywa nefenitshala yegadi.
Inika ukufikelela kuzo zonke iinkonzo ezinikezelwa yindawo yokuhlala:
- Idama lokuqubha elingajongwanga elinokufikelela simahla ukusuka ngo-9:30 am ukuya ku-9:30 pm (Ilanga: 25 x 10 - Ubunzulu: ukusuka ku-0.5m ukuya kwi-1.5m kwithambeka elithambileyo). Kuvulwa ukususela ngo-Epreli ukuya ekupheleni kuka-Oktobha (kuxhomekeke kwimozulu).
-Ukufikelela simahla kumabala emidlalo emininzi: Ibhola ekhatywayo, ibasketball, iikheji ze-badminton (izixhobo zinikezelwe)
- iitafile zeping-pong, inkundla ye-pétanque ...
-Igumbi lokuzonwabisa: Ibhola ekhatywayo yetafile, umatshini wepinball, ibhodi yeshuffle
FUMANA KWISIZA ukusukela kwisizini ka-2021:
-Ivenkile eluncedo enokukhetha iiwayini zalapha ekhaya
- Idiphozithi yesonka kunye neepastries
- Ihlawulwe self-service ilondolo
- Iziselo ezizisebenzelayo zokukhupha iziselo
- Ukurenta ibhayisekile (VTC kunye neebhayisekile zombane) kunye nokhenketho lwebhayisekile yeentaba unyaka wonke
- Gym & Qete studio unyaka wonke FROM 6am TO 10: ukufikelela kwigumbi ubunzima kunye nentsebenziswano-iiklasi: Fit, yoga, salsa, ukufaneleka, ... ukuqeshwa Shiatsu, zokuthambisa, aromatherapy, ubuhle ... amazinga okukhethayo abahlali zethu .
IMISEBENZI EYODWA NGOJULAYI NOAGASTI:
-Iklabhu yabantwana 3 kusasa ngeveki (simahla)
-Fina nomqeqeshi kabini ngeveki (simahla)
-Ipizza yelori yokutya rhoqo ngoMgqibelo ngokuhlwa (ngoJulayi nango-Agasti),
- Wamkelekile isiselo rhoqo ngoMvulo ehlotyeni
- Ice cream bar ngoLwesibini ehlotyeni
Inkqubo inikezelwa ekuqaleni kweveki.
Indawo yokuhlala eyenziwe ngamaplanga idityaniswe ngokugqibeleleyo kwindawo engqonge ilali yaseGers. Ibekwe ekungeneni kwilali yaseMontreal ukusuka eGers, echazwe njengenye yeelali ezintle kakhulu eFransi. Ungafika apho ngeenyawo okanye ngebhayisekile naphantsi kweendawo zayo zokuhlala, uya kufumana zonke iivenkile zalapha ekhaya ezinje ngebhula emnandi, indawo yokubhaka, iivenkile ezimbini zegrosari ezizele ziimveliso ezintsha, ibha, iindawo zokutyela, icuba / ivenkile yeencwadi ... Kwaye imarike yeveki rhoqo ngoLwesihlanu kusasa.
Ulwamkelo lwethu luvulwa ngoMvulo, ngoLwesibini, ngooLwezine, ngooLwezihlanu, ngeMigqibelo ukusuka ngentsimbi yesi-9 ukuya kweyesi-5 ebusuku (+ i-WE ngoJulayi nango-Agasti). Apho uya kufumana indawo yolwamkelo lokusefa kwi-intanethi, ulwazi oluninzi lwabakhenkethi, kunye nethala eligqunyiweyo. Irenti ibandakanya amashiti kunye neetawuli kunye nekhithi: isipontshi, ulwelo lokuhlamba izitya, itawuli yeti elahlayo, ingxowa yenkunkuma, umzimba olwelo kunye nesepha yeenwele, ...
Ulwamkelo lwethu luvulwa ngoMvulo, ngoLwesibini, ngooLwezine, ngooLwezihlanu, ngeMigqibelo ukusuka ngentsimbi yesi-9 ukuya kweyesi-5 ebusuku (+ i-WE ngoJulayi nango-Agasti). Apho u…